I-Crane Scale Factory -i-China Crane Scale abavelisi, abaxhasi
I-GNH, ukuPrinta ngesandla
Iqondo lobushushu eliphezulu crane isikali crane elektroniki unxibelelwano ujongano lwecomputer kunye interface enkulu imveliso screen ukuba ezinokudityaniswa kwi khompyutha.
Umphezulu wangaphandle weliqondo eliphezulu le-crane elenzelwa ubushushu obuphezulu yi-nickel-plated ngokupheleleyo, i-anti-rust kunye ne-anti-corrosion, kwaye iintlobo zomlilo kunye neziqhushumbo ziyafumaneka.
Iqondo lobushushu eliphezulu crane isikali crane elektroniki mayixhotyiswe mobile ivili ezine yokuphatha itroli ukwandisa uluhlu lwenkonzo yeqondo lobushushu eliphezulu isikali nendwe.
Ngokweqile, ukubonisa ngaphantsi kwesikhumbuzo, i-alamu yombane ophantsi, i-alamu xa umthamo webhetri ungaphantsi kwe-10%.
Iqondo lobushushu eliphezulu crane esikalini crane ine-oluzenzekelayo umsebenzi cima ukuthintela umonakalo ibhetri okubangelwa ukulibala ukuba ucime
I-GNP-ISICWANGCISO SOKUPHRinta Sc Isikali seCane
Entsha: Uyilo lwesekethe entsha, ixesha elide lokulinda kunye nozinzo
Ukukhawuleza: uyilo oluphezulu oluhlanganisiweyo lwenzwa, ukukhawuleza, ukuchaneka nokuzinzileyo kobunzima
Okulungileyo: Umgangatho ophezulu otywinwe ngokupheleleyo, ibhetri egcwalisekayo engenzakali, amandla aphembelela amandla e-aluminium enganyangekiyo
Uzinzo: Inkqubo egqibeleleyo, akukho ngozi, akukho hops
Ubuhle: Imbonakalo yefashoni, uyilo
Iphondo: Ulawulo olukude oluphathwayo, oluluncedo nolunamandla
Umsebenzi ophambili kunye nezalathi zobugcisa:
Bonisa iinkcukacha Ukukhanya okuphezulu okuphezulu kwe-5-isihlalo esiphezulu se-30mm
Ixesha lokufunda lokuzinza 3-7S
I-GNSD, egcinwe ngesandla-Iscreen esikhulu se-Crane Scale
Isikali se-crane ye-elektroniki engenazingcingo, iqokobhe elihle, elomeleleyo, anti-ukungcangcazela kunye nokumelana nomothuko, ukusebenza kakuhle okungangenwa ngamanzi. Ukusebenza kokuphazamiseka kokuchasana nombane, kunokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwi-electromagnetic chuck. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwizitishi zikaloliwe, isinyithi kunye nokunyibilikisa isinyithi, imigodi yamandla, iifektri kunye namashishini ezemigodi.
I-OCS-GS, i-Handheld, i-Crane Scale
1、Ukuchaneka okuphezulu kweselfowuni yomthwalo
2、Uguquko lwe-A / D: 24-bit Sigma-Delta analog-to-digital conversion
3、Ring umsesane kwalenza, akukho lula ukuba idle kunye nomhlwa
4、Uyilo lwe-hook snap yasentwasahlobo ukunqanda izinto ezinobunzima ekuweni
Isikali se-OTC Crane
Isikali se-Crane, esikwabizwa ngokuba ngamaxolo okuxhoma, izikali zehuku, njl.njl., Zinobunzima bezixhobo ezenza izinto zikwimeko yokuma ukulinganisa ubunzima (ubunzima). Sebenzisa i-GB / T 11883-2002 yomzi mveliso wangoku nje, ekwinqanaba leklasi ye-OIML. Izikali ze-Crane zihlala zisetyenziswa ngentsimbi, isinyithi, iifektri kunye nemigodi, izitishi zempahla, izinto zokusebenza, urhwebo, iindibano zocweyo, njlnjl apho kulayishwa khona kukothulwa, ukuthuthwa, umlinganiso, ukuhlaliswa kunye namanye amatyeli ayimfuneko. Iimodeli eziqhelekileyo zezi: 1T, 2T, 3T, 5T, 10T, 20T, 30T, 50T, 100T, 150T, 200T, njl.
Ubunzima obuqinisekisiweyo, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Isikali sokulinganisa sokulinganisa, UkuLungiswa kweMisa, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital,